Tyhala iSushi ikuguqula ube ngumpheki wesitya saseJapan | Androidsis
Iphazili yokutya kunye nePush Sushi kunye neeresiphi zayo ezimnandi
Push Sushi yenye yeepuzzle zokupheka apho siya kuba yingcali yokupheka kuloo recipe evela eJapan. Kwaye ukuba sowuzokuya kwisidlo sangokuhlwa okanye isidlo sasemini, kungcono ulinde kancinci de isisu sakho sigcwale ngaphambi kokuba ube nexesha elimnandi nale phazili limnandi elinomlutha kakhulu.
Soloko ufuna ukufumana isitshixo esifanelekileyo umdlalo umlutha kakhulu. Kwaye inyani, njengoPush Sushi, lowo ulikhoboka lotywala uhlala ehlala eza nento elula koomatshini. Apha kuyakuba kukulungiselela i-sushi ngokusika ezo ziqwenga kunye nokushiya abanye ngaphambi kokuphaka eso sidlo simnandi saseJapan.
1 Ukutyabeka ngoku, kulindelwe ngumthengi
2 Zisa i-sushi kumthengi kwezi ntshukumo zimbalwa
3 Vula yonke i-sushi kwaye ungalibali imikhondo kwi-Push Sushi
Ukutyabeka ngoku, kulindelwe ngumthengi
Push Sushi iqala kwisiseko esilula kwaye kukulungiselela ezo Izitya zaseJapan zodumo oludumileyo lwehlabathi. Into emnandi ukuyibeka emlonyeni kwaye kwi-Push Sushi siya kuzama ukulungisa ukuze izisu zabaxhamli zonwabe.
Ubucukubhede bomdlalo bulula kakhulu, kuba kuya kufuneka sibenzile hambisa iziqwenga ezahlukeneyo zeSushi ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye ukuhambisa eliphambili ukuya kwelinye. Masithi kuya kufuneka sivumele i-sushi yethu elungisiweyo iye ngqo etafileni.
Ukwenza oku kuya kufuneka sihambise iibhloko ezahlukeneyo ukusuka phezulu kuye ezantsi, njengoko siza kuba nakho ukuhambisa ngokuthe nkqo. Zonke iintshukumo esizenzayo etafileni ziya kubalwa ukuze sazi ukuba ngaba sikhetha amanqaku apheleleyo eenkwenkwezi ezi-3, okanye ukuba siza kuhlala kwezi zimbini okanye inqaku.
Zisa i-sushi kumthengi kwezi ntshukumo zimbalwa
Kwaye esi sisiseko esingundoqo sePush Sushi, ukwazi ukuba unayo inani le-x lokuhamba ukwenza umsebenzi wokupheka. Ngamanye amagama, ukuba bacebisa iintshukumo ezintlanu, siyakuhlala sizama ukuzenza ezine okanye ngaphantsi. Ngale ndlela siya kufumana elona nani liphezulu lamanqaku kwinqanaba ngalinye lePush Sushi.
Ukuthetha inyani, baninzi kakhulu kubo abakulungeleyo ukusivavanya, kumdlalo othi, nangona uqala nje kubonakala ulula, iyakwazi ukusidibanisa kwimizuzu nje embalwa. Ngamanye amaxesha asazi ngesizathu soko, kodwa nge-Push Sushi yenzeka ngoluhlobo. Sikucaphula kuphela ukuba uzifumanele ngokwakho kwaye ke usazi esona sizathu siphambili sokuba sithethe ngalo mdlalo kule migca.
Vula yonke i-sushi kwaye ungalibali imikhondo kwi-Push Sushi
Njengakwinxalenye enkulu yemidlalo egcwele iVenkile yeGoogle Play, sinako vula inani elifanelekileyo leSushi ukulungiselela ukugxininisa iiyure zethu zokudlala. Okufanayo kuya kwimiqondiso eya kuthi ibe luncedo olukhulu kuthi xa sizifumana sibambekile kwinqanaba elithile lePush Sushi.
Sicebisa ukuba uzame zonke iintshukumo, nkqu nesushi yakho leyo inokuhlala ivimba indlela yabanye ngenjongo yokuyicoca. Kwi-Push Sushi sijamelene nephazili apho kuya kufuneka sicofe ii-neurons esele sizishiyile, ke lolo hlobo lomdlalo olonwabisayo ngelixa sihamba ngololiwe ukuya emsebenzini okanye sichitha imva kwemini echibini.
Ekufezekisweni kobugcisa udlala amakhadi akhe ngombono obonwe kakuhle, kodwa inefuthe elikhulu. Imibala yamabala lulwimi loyilo lwesitayile esicocekileyo ngokubanzi. Eminye, inayo yonke into esiyifunayo ukuze sikwazi ukugxila ekutyhaleni i-sushi ukusuka apho ukuya apho kunye nokugqibezela olo luhlu lukhulu lwamanqanaba esinawo ngePush Sushi.
Push Sushi ifuna ukukhupha loo chef uphetheyo kuwe ukukubonisa ukuba kulula kunokuba kubonakala ngathi kulungiswa esi sidlo saseJapan. Umdlalo onawo simahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle kwaye, njengabanye abaninzi, unayo loo micropayments yokufumana uncedo. Umdlalo olikhoboka.
Isitayile esibonakalayo seGimmicky
Ayilungiselelwe i-18: 9
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Iphazili yokutya kunye nePush Sushi kunye neeresiphi zayo ezimnandi